उम्मेदवार भोट माग्दै, किसान सिँचाइ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
उम्मेदवार भोट माग्दै, किसान सिँचाइ
कार्तिक २३, २०७४ दीपेन्द्र बडुवाल, मनोज पौडेल
चाकरचौडा (कपिलवस्तु) — जिल्लाका किसान धान भित्र्याएर गहुँ छर्ने तयारीमा छन् । केहीको धान काट्नै बाँकी छ । अधिकांश स्थानीय बासिन्दा खेतमा व्यस्त भेटिन्छन् । यसैबेला प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनले पनि तताउन थालेको छ ।
यहाँका मतदाताहरू उम्मेदवार व्यक्तिको ‘छवि’ केलाइरहेका छन् । स्थानीय जियाउर रहमानले भने, ‘यहाँका समस्या सरकारलाई सुनाउन सक्नेलाई भोट दिने हो ।’ कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत रहेको प्रदेशसभा (ख) मात्रै ४८ हजार ४ सय ६ मतदाता रहेका छन् । हुलाकीअन्तर्गत रहेको यो बस्ती मुस्लिम बहुल हो ।
चुनाव मिति नजिकिन थालेपछि यहाँ माहोल तात्न थालेको छ । उम्मेदवारको ओहोरदोहोर र मतदाताका जमघट देखिन थालेको छ । ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या सिँचाइको छ,’ मायादेवी गाउँपालिकाका कपिलदेव चमारले भने, ‘वर्षौंदेखि आकासे–पानीको भरमा खेती गर्दै आएका छौं ।’ यहाँ बस्ती नजिकै सिसई नदी रहेको छ । उक्त नदीको पानीले सिँचाइ गर्न कुलो छैन । सिमानामा भारतले बाँध निर्माण गरेको छ । उक्त सिसई बाँधले गर्दा यहाँको सयौं बिघा खेत डुबानमा पर्छ । सिसई नजिकै भारतमा अर्को मर्थी (मझौली) बाँध रहेको छ । दुई बाँधका कारण बर्सेनि यहाँका घर र खेत डुब्ने गरेका छन् । ‘डुबेकाले धान काटन पाइएन,’ चमारले भने, ‘गहुँ छर्न नपाइने भयो ।’ यसअघि जिताएका नेताले सबै समस्या हल गर्छु भने पनि कसैले वाचा पूरा नगरेको उनको गुनासो छ ।
‘हालसम्म भोट हालेर पाएको विकास यही हो,’ मायादेवीकै अब्बु हरेराले भने । यसपालि सीमावर्ती बासिन्दाले डुबानका कारण कसैले पनि धान स्याहार्न नपाएको बताए । ‘यहाँबाट ठूला ठूला नेता भए,’ उनले भने, ‘दक्षिणका बासिन्दालाई कसैले हेरेनन् ।’ यहाँ हाल रासायनिक मल अभाव छ । मुलुकभित्र उपलब्ध नहुँदा भारतबाट तस्करी हुने गरेको छ । गहुँ छर्ने बेला बीउ छैन । उपलब्ध बीउ पनि महँगो छ । यहाँका बासिन्दा बीउका लागि पनि भारतमा निर्भर छन् ।
‘समस्या हल गर्छौं’
यसपालि विभिन्न दलका उम्मेदवारले स्थानीयका समस्यासित परिचित रहेकाले आफूले जितेमा हल गर्ने बताएका छन् । स्थानीयले यहाँ विकास ल्याउने प्रतिनिधिभन्दा प्रदेशसभाका उम्मेदवार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । निवार्चन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेश (ख) का कांग्रेस उम्मेदवार राजेश आचार्यले यस क्षेत्रका शत प्रतिशत बासिन्दा कृषिमा आधारित रहेको जनाए । ‘सिँचाइ मूल समस्या हो,’ उनले भने, ‘आसपास खोलामा साना बाँध बनाएर पानी ल्याउन सकिन्छ ।’
वाम गठबन्धनबाट यहाँका उम्मेदवार फजलर्र रहमानले बच्चैदेखि यहाँका समस्यासित परिचित भएकाले विकास योजना ल्याउन पहल गर्ने बताए । ‘पैसाको लोभी छैन,’ उनले भने, ‘जितेमा यहाँका शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइका समस्या हल गर्नेछु ।’ यहाँका स्वतन्त्र उम्मेदवार अससारुद्धिन मुसलमानले १० वर्ष राजनीतिक गर्ने क्रममा घरघरका समस्या बुझेको दाबी गरे । ‘यहाँ अशिक्षा उच्च छ,’ उनले भने, ‘युवा बेरोजगार छन् ।’
यहाँका बासिन्दाको मन जित्न प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार पनि दौडधुपमा छन् । ‘यतिबेला किसानलाई मलको समस्या छ,’ जनमुक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार दिनेशमणि त्रिपाठीले भने, ‘सिँचाइ, बीउ केही छैन ।’
प्रभु इन्स्योरेन्सको १९.२० % बोनस
कार्तिक २३, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — प्रभु इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई १९.२० प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको मंगलबार सम्पन्न २२ औं साधारणसभाले उक्त निर्णय पारित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि बोनस सेयरपश्चात् १०:४.६ हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेसमेत पारित भएको जनाइएको छ ।
पहिरोको जोखिममा बस्ती
यौन दुर्व्यवहार आरोपमा पक्राउ
स्मार्ट लाइसेन्स नै नक्कली
कलेजो प्रत्यारोपण अन्तिम चरणमा
समाजवादी सरकारको उल्टो बाटो
डा. कृष्णबाबु श्रेष्ठ श्रावण ६, २०७५
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता पाँच महिना व्यतित भएको छ । यो अवधि सरकारको मूल्यांकनका लागि पर्याप्त हैन । दुई तिहाई बहुमतको, बलियो/स्थिर, कम्युनिष्ट...
बीपी बिर्सने कांग्रेस
डीला संग्रौला श्रावण ६, २०७५
नेपाली राजनीतिका अग्रणी बीपी कोइरालाको ३७ औं स्मृति दिवसमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्मरण गर्नु सबैको कर्तव्य हो । बीपीका राजनीतिक विचारवाट निर्देशित नेपाली कांग्रेस आज अप्ठेरो अवस्थामा...
जिम्बावे बनाउने कि जापान ?
खगेन्द्रप्रसाद रिजाल श्रावण ६, २०७५
जिम्बावेको अधिक मुद्रास्फीति – हालैका दिनमा एक अमेरिकी डलरको मूल्य नब्बे हजार इरानी रियाल बराबर कायम भएको छ । योभन्दा अझै आश्चर्यजनक अधिक मुद्रास्फीति वा ‘हाइपर...
रंगभूमिमा रंगकै बेरंग
सम्पादकीय श्रावण ६, २०७५
ढंग नमिलेको रंगले कुनै रूप दिँदैन । त्यस्तै ढाँचा नपरेको कामको कुनै कला हुँदैन । व्यापारिक प्रयोजनका लागि रातारात बनाइएका चित्र कलाकृति हुँदैनन् । भित्तामा सजिएका छन् भने...
दलित छात्रावासको स्वामित्व
गणेश विश्वकर्मा श्रावण ६, २०७५
एक सांसदले काठमाडौंमा दलित भएकैले डेरा नपाएको विषय संसदमा उठाएको घटना ताजै छ । ६० वर्ष पहिला काठमाडौंको जातीय भेदभाव र छुवाछूत अवस्था झन् कस्तो थियो...
भुटानी राजाको बदलिँदो कार्यशैली
बलराम पौड्याल श्रावण ६, २०७५
हाम्रा छिमेकी शिवराज गुरुङ र पासाङ छिरिङ लेप्चाका सहपाठी थिए, युवराज जिग्मी सिङे वाङचुक । शिवराज र पासाङ असल, चरित्रवान् युवराज साथी पाउँदा आफैँलाई भाग्यशाली सम्झन्थे ।...
राति दाँत माझ्नुभो ?
डा. रेशा शर्मा श्रावण ६, २०७५
प्रश्नको उत्तर सोच्दा तपार्इं अकमकिन सक्नुहुन्छ । किनकि यसले तपाईंको व्यक्तिगत आनीबानीबारे सोधेको छ । ब्रस नगरेकाले उत्तर भन्न तपार्इंलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्न सक्छ । यसो भए, खुसी...
चिनियाँ रेलको दिवास्वप्न
डा. नारायण खड्का श्रावण ५, २०७५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत तेस्रो साता भारत र २०७५ असार पहिलो साता चीनको भ्रमण गरे । ती देशका प्रधानमन्त्रीहरूबाट न्यानो अँगालो नपाए पनि ‘रातो...
राजु घिसिङ श्रावण ५, २०७५
विगतका विश्वकपले महिनौं अघिबाट मिडियामा ठूलै स्थान लिने गरेका थिए । यसपालि भने त्यस्तो देखिएन । न्युजविक, टाइम लगायतले ६ महिना अघिदेखि बारम्बार विश्वकप फुटबललाई लिएर कभर...
रक्षाराम हरिजन श्रावण ५, २०७५
मानव अधिकारलाई अनेक चस्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । सवर्णका लागि एउटा मानव अधिकार, महिला, मधेसी, जनजाति, दलित लगायतका लागि अर्कै मानव अधिकार ! मधेस आन्दोलनमा भएको...